काठमाडौं डेंगुको उच्च जोखिममा - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं डेंगुको उच्च जोखिममा
प्रकाशित मिति: २७ श्रावण २०७६, सोमबार
काठमाडौं । विश्वमा नै लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने खतरनाक डेंगुका बारेमा बहस हुनुका साथै खोपको समेत परीक्षण भइरहेको छ । यसै विषयमा नेपालमा पनि ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले आइतवार डेंगुरोग रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी सञ्चारकर्मीसँग अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्दै नेपालमा डेंगुको प्रमुख स्रोत पानी र फोहोर भएको औल्याउँदै अब काठमाडौं पनि डेंगुको उच्च जोखिममा रहेको जानकारी गराएको छ ।
बदलिँदो वातावरण, अत्यधिक गर्मी, यातायातका साधनहरू तराई, हिमाल, पहाड सजिलै पुग्ने र डेंगुका बिरामी पनि सहजै पुग्ने हुनाले सन् २००४ मा १ विदेशी नागरिकमा नेपालमा देखा परेको डेंगु अहिले के तराई, के पहाड, के हिमाल जताततै फैलिएको बताइएको छ । गत वर्षको दाजोमा यो बर्ष अत्यधिक गर्मीका कारण डेंगुको समस्या ह्वात्तै बढेको छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालले रोगी लामखुट्टेले सफा र फोहोर दुबै पानीमा अण्डा पार्ने र अण्डा पारेको भाडा, प्लाष्टिक, गमला, पोखरी जुनसुकै ठाउँमा अण्डा भित्तामा टासिएर रहने भएकाले १ वर्षसम्म पनि मर्दैन । भाडामा पानी सुके पनि अण्डा जीवितै हुने र पुनः पानी पाउना साथै बिउझने गर्दछ ।
एक पटकका संक्रमित लामखुट्टे २ सयदेखि ३ सयसम्म अण्डा पार्ने हुनाले एकै पटक धेरै मानिसलाई टोक्ने गर्दछ । यो संक्रमित लामखुट्टेले मान्छे र पशुलाई टोक्दछ । ‘रगतकै माध्यमबाट संक्रमण फैलाउने मात्र नभै संक्रमित लामखुट्टेले पारेको अण्डा र त्यसबाट निस्कने लामखुट्टे पनि संक्रमित हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपालमा डेंगु लगायतका रोग नियन्त्रणका लागि प्रत्येक प्रदेशमा ६ करोड १७ लाख अर्थात एउटा निकायमा ८७ लाख देखि ८९ लाख सम्म पठाएको डा. विवेक कुमारले जानकारी गराए ।
प्रदेश नम्बर १ को सुनसरीमा मात्र यस बर्ष ३ हजार २५ जनामा डेंगु देखा परेको छ । यस बर्ष क्षेत्र नम्बर १ र मा डेंगुको महामारी फैलिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ । ५ वर्षअघिसम्म १२ जिल्लामा फाटफुट रुपमा देखिएको डेंगु ५ वर्षको बीचमा ५६ जिल्लामा देखापरिसकेको छ ।
महाशाखाका अनुसार देशभरका ५६ जिल्लामा डेंगुका बिरामी फेला परिसकेका छन् । ५ वर्षअघि १२ जिल्लामा जम्मा ३ सय २ डेंगु बिरामी भेटिएकोमा यो वर्ष ३४ जिल्लामा ३ हजार ४ सय २५ जनामा डेंगी देखापरिसकेको छ ।
महाशाखको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष प्रदेश १ का १० वटै जिल्लामा डेंगु भेटिइसकेको छ । जसमा सुनसरीमा बढी र त्यसपछि मोरङ र झापामा बिरामी भेटिएका छन् ।
प्रदेश २ मा ४ जिल्लामा १२ बिरामी, प्रदेश ३ का ९ जिल्लामा १ सय २६, गण्डकी प्रदेशका ५ जिल्लामा २६, प्रदेश ५ का ९ जिल्लामा ९६, कर्णाली प्रदेशको सल्यानमा मात्र १ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ५ जिल्लामा १२ बिरामी भेटिएका छन् । यो वर्ष प्रदेश २ मा पर्सा र सप्तरी, प्रदेश ३ का मकवानपुर र चितवनमा, गण्डकी प्रदेशको कास्की, प्रदेश ५ को रुपन्देही र नवलपरासीमा बढी बिरामी भेटिएका छन् ।
महाशाखाका अनुसार धरानमा ३० वैशाखदेखि पूर्वी तराईको धरानबाट शुरू भएको डेंगुको संक्रमण अझै पनि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । विगत वर्षका अनुभवका आधारमा पनि थप सतर्कता अपनाउँदै समयमै रोकथामका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी न्यूनीकरणतर्फ लाने प्रयास भइरहेपनि प्रभावहीन देखिएको छैन । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
विजय कुमार गच्छदार उपप्रधानसहित तीन मन्त्रालय लिँदै सरकारमा सहभागी हुँदै
काठमाडौँ, २५ वैशाख विजय गच्छदार सरकारमा सहभागी हुँदै, कमल थापाले सम्हालेको मन्त्रालय सम्हाल्ने काठमाडौं । […]
दिनेश्वरप्रसाद गुप्ता पत्रकार महासङ्घ सिरहाको अध्यक्ष
जेठ ३० ।लहान,नेपाल पत्रकार महासङ्घ सिरहाको अध्यक्षमा दिनेश्वरप्रसाद गुप्ता चयन हुनु भएको छ । लहानमा सोमबार […]
परराष्ट्रमन्त्री डा महत बुधबार भारत जाने
काठमाडौं । आगामी बिहीबार भारतको नयाँदिल्लीमा हुन गइरहेको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा […]
अस्ट्रेलियामा सडक दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका दुई नेपाली विद्यार्थीको पहिचान खुल्यो
अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियामा सडक दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका दुई नेपाली विद्यार्थीको पहिचान खुलेको छ । […]
दाता सम्मेलनमा भाग लिन अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीहरु आउन थाले
असार ८ ।काठमाडौं,असार १० गतेदेखि सुरु हुने दाता सम्मेलनमा भाग लिन अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीहरु आजदेखि काठमाण्डौ […]
पार्टीभित्र र बाहिरका गतिविधिको समन्वय गर्न एमाओवादीको विभागहरू गठन
साउन ६ ।काठमाडौँ, एकीकृत नेकपा माओवादीले पार्टीभित्र र पार्टी बाहिरका गतिविधिको समन्वय गर्नका लागि विभिन्न […]
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी : कुन मन्त्र र विधिले पूजा गर्ने ?
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका २२ जना चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा
कृष्णजन्माष्टमी: कृष्णमन्दिरमा बिहानैदेखि घुइँचो,रातभर जाग्राम बसी पूजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास
माधव नेपाललाई प्रश्न : पार्टीमा यत्रो मनमुटाव छ, अब तपाईं कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
बिरामीलाई किन राखिन्छ आईसीयूमा? कतिबेला निकालिन्छ?